အသည်းအစားထိုးကုသမှုအကြောင်း ကလေးကို ဘယ်လိုပြောမလဲ - Hello Sayarwon
အသည်းအစားထိုးကုသမှုအကြောင်း ကလေးကို ဘယ်လိုပြောမလဲ
အသည်းအစားထိုးကုသမှုဟာ သင်ရော သင့်ကလေးငယ်အတွက်ပါ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်စွာ နာလန်ထူနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ကလေးကို ဒီအတွေ့အကြုံ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကို လုံခြုံစိတ်ချရမှု အပြည့် ခံစားရအောင် လုပ်ပေးဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်ခန္ဓါမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ၊ ဘာတွေကို မျှော်လင့်ထားရမလဲဆိုတာကို ကလေးငယ်ကို သေချာစွာ ရှင်းပြထားသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်နဲ့ သင့်ကလေးငယ်ကို ဘယ်လောက်အထိ ပြောပြသင့်သလဲဆိုတာဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်ကို မူတည်ပါတယ်။ သင့်ကလေးငယ်ကို ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုးစားပါ။ တခါတရံမှာ သင့်ကလေးငယ်ဟာ အမှောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တာကြောင့် ဒါဟာ ပိုမိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး စိတ်ပူပန်ခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ နာလန်ထ ဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်နှေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် အောက်ပါအချက်တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ လုံခြုံပြီး အကာအကွယ် အပြည့်ရှိတာ သင်က သူတို့အတွက် အချိန်တိုင်း အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
ဘာတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ၊ သူတို့ ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။
ဒီအခြအနေကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ကုသမှု အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အသည်းဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်လဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းရှင်းပြထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကန့်သန့်ထားတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုလဲ ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာ လိုအပ်ရင် သင့်အကူအညီနဲ့ သူတို့ဟာလည်း မေးခွန်းတွေ မေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကြီးတွေအတွက်တော့ အောက်ပါအချက်တွေကို အသိပေးထားသင့်ပါတယ်။
သင်နဲ့ သင့်ဆရာဝန်တွေဟာ သူနဲ့ အတူရှိနေမှာကြောင့် ကလေးငယ်ဟာ သူ့ရောဂါကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။
သူတို့အခြေအနေဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
လူပျို၊ အပျိုဖေါ်ဝင်ခြင်းဟာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ဆေးတွေ လိုလာနိုင်ခြင်းတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ သူတို့ဘက်မှာ အမြဲရှိပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဟာ အစားထိုးကုသမှုကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ကို အိမ်မှာ အားပေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတွေကနေ အကျိုးကျေးဇူးရစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို အမြဲမပြတ် ထွေးပွေ့ထားသင့်ပါတယ်။ သင့်အရေပြားရဲ့ နွေးထွေးမှုနဲ့ နှလုံးခုန်သံကြောင့် သူတို့ဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်တွေအတွက်တော့ စကားပြောဖို့ နည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခုခု မကောင်းတာကြောင့် ရောဂါဖြစ်နေတယ်၊ ခွဲစိတ်ခံရတယ်လို့တောင် ထင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပဲ သင်နဲ့ ဆရာဝန် အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ အသည်းကို ပြန်ကောင်းအောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို သိစေသင့်ပါတယ်။
တခါတရံမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ရှင်းပြဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ပုံတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်က ဆရာဝန်၊ ဆရာမ ကြောက်ခြင်းကို လျော့ကျစေဖို့ သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ ဆရာဝန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အစားထိုးကုသခြင်းအကြောင်းကို ပြောထားခြင်းဟာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ကို အံ့သြတကြီး မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ရရှိဖို့အတွက် သူတို့ဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါယတ်။
ကလေးကြီးတွေအတွက်ကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ် အစရှိတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုမို သိလိုစိတ်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို သိလိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်တယ်၊ ကျန်းမာတယ်၊ နေကောင်းတယ် အစရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အစားထိုးခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ဘာတွေကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း ပြောထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ သူတို့ ဘယ်လိုခံစားရမယ်၊ အိမ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်မယ်၊ သူတို့ရဲ့ အသည်းကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ မကြာခဏတွေ့ရမယ် အစရှိတာတွေကို ပြောထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောထားခြင်းဟာ သင်နဲ့ သင့်ကလေးကြားက ယုံကြည်မှုကို တိုးမြှုင့်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ ပိုမို အမှီအခိုကင်းပြီး သူတို့ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပိုမို သိလိုကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ခွဲစိတ်မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေကို ပိုမို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သင်နဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းဟာ အကျိုးရှိပြီး ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့လည်း မေးခွန်းတွေ မေးစေသင့်ပါတယ်။ သင်က သူတို့ဘေးက နေပြီး ထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့အတွက် အမြဲအဆင်သင့် ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့က သိလိုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Children’s liver disease’s foundation. http://www.childliverdisease.org/Information/Living-with-liver-disease/-Talking-to-your-child. Accessed 15/08/2015.
Boston’s children hospital staff. Talking to Kids About Transplantation. http://www.childrenshospital.org/transplant-talk/spring-2014/talking-to-kids-about-transplantation .Accessed 15/08/2015.